Ukuphepha kwe-inthanethi | i-Google ikugcina uphephile kanjani ku-inthanethi
Sisiza ukwenza i-inthanethi ukuthi iphephe kuwo wonke umuntu.
Sinomlando omude wokuthuthukisa ubuchwepheshe bokuphepha obungazuzisi kuphela abasebenzisi bakhon, kodwa umhlaba we-inthanethi wonke. Uma sidala ubuchwepheshe ukugcina amasevisi ethu aphephile, sithola amathuba okwabelana ngazo zonke izinzuzo. Futhi njengoba ukucindezeleka kushintsha ngesikhathi, izilinganiso zethu ezijwayelayo, ezibheke phambili zivula indlela yezinkampani ongazilandela.
Ukuphequlula okuphephile kuvikela ukudlula abasebenzisi be-Chrome
Sakha uqobo ubuchwepheshe bokuphequlula okuphephile ukuvikela abasebenzisi be-Chrome ezinhlelweni ezingalungele ikhompyutha nemizamo yobugebengu ngokubazisa uma bazama ukuvakashela amawebhusayithi ayingozi. Ukwenza i-inthanethi iphephe kuwo wonke umuntu, senze lobu buchwepheshe mahhala ezinkampanini ukuthi zisebenzise kuziphequluli zazo, kufaka phakathi i-Apple Safari ne-Mozilla Firefox. Namuhla, ihhafu yomhlaba yabantu abaku-inthanethi ivikelwe ngokuphequlula okuphephile.
Futhi sazisa abanikazi bamawebhusayithi uma amasayithi abo anokuvuza kokuphepha futhi sinikezele ngosizo ngokushesha ukulungisa izinkinga. Ngokuqhubeka nokwabelana ngobuchwepheshe bokuphepha obusha njengoba sibukhulisa, sisiza ukwakha i-inthanethi ephephile kuwo wonke umuntu.
Sisebenzisa i-HTTPS ukukugcina uphephile ngenkathi uphequlula i-inthanethi
Ukuxhuma kumasevisi ethu ngokubethela kwe-HTTPS kukuvikela ezigebengwini nabahlaseli abangalungile ukuqinisekisa ukuthi uthola okufunayo lapho ufuna khona. Ukukhuthaza amawebhusayithi ukujwayela lokhu kuphepha okungeziwe, senze ukubethela kwe-HTTPS okunye kwamasignali usesho lwe-Google olulusebenzisayo uma kulinganiswa amawebhusayithi emiphumeleni yosesho.
Sidala imiklomelo yokuphepha ukwembula ubungozi
Ku-Google sidala izinhlelo zemiklomelo yokuphepha ekhokhela abacwaningi abazimele ukuthola ubungozi kumasevisi ethu nokudala ukulungiswa kokuphepha. Njalo ngonyaka sinika imiklomelo izigidi zamadola emalini yocwaningo nezulungisi maphutha. Okwamanje sisebenzisa izinhlelo zemiklomelo zokuphepha ngemikhiqizo eminingi ye-Google, njenge-Chrome ne-Android.
Senza amathuluzi ethu okuphepha ukuthi atholakalele onjiniyela
Sabelana ngobuchwepheshe bethu bokuphepha uma sikholwa ukuthi bunganikeza ivelu kwabanye. Isibonelo, senza isketha sethu sokuphepha se-Google Cloud ukuthi sitholakale mahhala konjiniyela ukuze bakwazi ukuskena futhi bahlaziye izinhlelo zabo zokusebenza zewebhu ku-App Engine ngobungozi bokuphepha.
Sabelana ngedatha mayelana nezenzo zokuphoqelela i-inthanethi ephephile
Kusuka ngo-2010 i-Google ishicilele umbiko okhanyelayo, okufaka phakathi izibalo ezintweni ezifana nokukhishwa kwe-copyright, izicelo zikahulumeni zedatha yomsebenzisi, neziqaliso zokuphepha ezifana nokuphequlula ngokuphepha. Futhi sabelana ngedatha eqaliseni ukusebenzisa komkhakha wokubethela kumawebhusayithi nama-imeyili. Asenzi lokhu ukwabelana ngokuqhubeka kwethu kuphela nabasebenzisi bethu, kodwa ukukhuthaza abanye ukujwayela ukuphepha okuqinile entshisakalweni ye-inthanethi ephephile kuwo wonke umuntu.